ဒီကင်ဆာဆိုတဲ့ရောဂါက ဘာလို့ငါ့ကျမှ ဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီး အားငယ်နေမိပြန်တယ်ဆိုတဲ့ တေးသံရှင်မီးမီးခဲ
Home > အနုပညာ
Published date 17th February 2020
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတောမီးမီးခဲကတော့ ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ တေးသံရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အသံချိချိုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မီးမီးခဲရဲ့ တေးသီချင်းလေးတွေကလည်း ယနေ့အချိန်ထိတိုင် အောင်မြင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း နားထောင်နေကြဆဲပါနော်။မီးမီးခဲရဲ့ အနုပညာခြေလှမ်းတွေကကျဲနေပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ အစဉ်အမြဲစောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မီးမီးခဲက မကြာသေးခင်လပိုင်းအတွင်းမှာ တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲလေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကို အားရပါးရဖျော်ဖြေခဲ့ပါသေးတယ်နော်။မီးမီးခဲဟာဆိုရင် ရင်သားကင်ဆာဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရပေမယ့်လည်း ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရင်ဆိုင်ပြီး အပြုံးမပျက်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ မီးမီးခဲက သူမရဲ့ရောဂါနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း သေသေချာချာကုသမှုခံယူပြီးဂရုစိုက်နေတာပါ။မီးမီးခဲကတော့ သူ့ရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်လေးကို အောက်ပါအတိုင်းရေးသားမျှဝေလာပါတယ်နော်။
“ဘာကြောင့်အားတွေမရှိသလို ခံစားရတာလဲ??အရိုးတွေအမြဲကိုက်ခဲတဲ့ဒဏ်ကလဲ ..လူကိုပင်ပန်းစေတယ်.မြန်မာပြည်မှာတစ်ရက်လေးမှ နားရက်မရှိ ခဲ့ပေမဲ့ စိတ်တွေဟာ တက်ကြွလန်းဆန်းခဲ့ပေမဲ့..မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ဝန်တာနဲ့ယှဉ်ရင် တခြားစီပါပဲလား..
ကလေးတွေရဲ့မနက်စာ ,နေ့လည် ညစာကလေးတွေရဲ့ကျောင်းထမင်းဘူး ,ရေချိုးပေးတာကအစ ကိုယ်လက်ကိုယ့်ခြေမှ ကျေနပ်သူမို့မောတာကလဲမပြောနဲ့လေနော် အခုတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း မောနေတယ်..ဒီကင်ဆာဆိုတဲ့ရောဂါ ဘာလို့ငါ့ကျမှ ဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီး အားငယ်နေမိပြန်တယ်..အရင်လို ခွန်အားသစ်တွေ ပြန်ရဖို့ဆုတောင်းနေမိတယ်..”ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ်နော်။
ပြည်သူနဲ့ အနုပညာရှင်တွေဆီက ကောက်ခံထားတဲ့အလှူငွေ (၁၃၅) သိန်းကျော်ကို အင်းစိန်ဆေးရုံကြီးမှာလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ဘဝတူချင်းမို့ ကိုယ်ချင်းစာနာစွာ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတွေမှာသွားရောက်လှူဒါန်းပေးမယ့် ယုန်လေးနဲ့ Jessie
မွန်ပြည်နယ်မှာ နဂါးရုံဘုရားတည်ပြီး သိန်း(၅၅၀) ဖိုး မွေးနေ့အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကရတဲ့ အမြတ်ငွေနဲ့ မျက်လုံးတစ်လုံးလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ လှအဉ္ဇလီတင့်
ဘောလုံးအရမ်းကြိုက်ပြီး အဖေ့သွေးအပြည့်ပါတဲ့ သားလေး နဲ့ အတူ ဘောလုံးကစားပေးနေတဲ့ အောင်သူ
Sai Sai Birthday Show ကနေရရှိခဲ့တဲ့ သိန်း(၈၀၀) ကို လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
ဖူးခက်တွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၁ ဦး ထိုင်းဘတ် ၆ သန်းဖိုး ထီပေါက်
ဒီနေ့မနက် ဂျပန်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ မြန်မာအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မူ !
သူတို့ရဲ့အကြားအမြင် ဗဟုသုတက အတော်နိမ့်ပါးတယ်။ သူတို့က ဂုဏ်တောင်ယူနေပုံရတယ်’ လို့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးညီညီထွန်းလွင်ပြော
တစ်ပြည်လုံး မီးလင်းရေး တရုတ်ကိုကျော်ပြီး ဂျပန်ကုမ္ပဏီ (၃) ခုကို LNG စက်ရုံဆောက်ဖို့ တင်ဒါချပေး
ကျောင်းမတက်ဖူးတဲ့ ကျော်စွာကို မျက်ရည်လည်စေခဲ့တဲ့ ယုန်လေးရဲ့ သီချင်းဗွီဒီယို
ပုဂံဘုရားအချို့ ဌာပနာ ဖောက်ထွင်းခံရမှု CID ကစုံစမ်းနေ
မင်းသား Sushant Singh Rajput မသေဆုံးခင်မှာရိုက်ကူးသွားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်
©2020 Tips News